January 15, 2021 - Khitalin Media
January 15, 2021 by Khitalin Media
မိန်းကလေးများ အခန့်မသင့်ရင်အသက်ပါ ဆုံးရှုံးနိုင်သဖြင့် သတိပြုမိစေရန်အတွက် မျိုးသမီးမိန်းကလေးများ အခန့်မသင့်ရင်အသက်ပါ ဆုံးရှုံးနိုင်သဖြင့် သတိပြုမိစေရန် အတွက် ရှယ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီကြပါရှင့် ကျေးဇူးပြုပီး သင်သိသော အမျိုးသမီးများကိုမျှဝေပေးပါ (သင်သည် အမျိုးသား တစ်ယောက်ဆိုပါက ယခုအကြောင်းရာ အားအမျိုးသမီးများအတွက် မျှဝေပေးပါ) အမျိုးသမီးများ ရာသီ ကာလ အတွင်း အောက်ပါ အချက်များ မလုပ်သင့်ပါ။ ဒါတေကတော့ ၁။ ရာသီချိန် ကာလ အတွင်းရေခဲရေ၊ ဆိုဒါမသောက်သုံးသင့်သလို အုန်းသီးလဲ မစားသင့်ပါ။သုတေသီ များ၏ လေ့လာချက် များအရ ရာသီကာလအတွင်း ရေခဲရေ သောက်သုံးးခြင်း သည် သားအိမ်တွင်း ကျန်ရှိ ​နေသော ရာသီသွေးကိုခဲစေ တက်ပီး ၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အတွင်း အကြိမ်ရေများလာသည့် အခါသားအိမ်ကင်ဆာ အကျိတ်ဖြစ် ပေါ်စေ နိုင်ပါတယ်။ … Read more
အသက် ( ၂၀ ) ကျော်ကောင်လေးကအသက် ( ၈၀ ) ကျော် အဖွားအိုကိုလက်ထပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်း
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ လောကမှာ လူလှဖို့ ထက် စိတ်လှဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ လက်ခံကြမယ်ထင်ပါတယ်။ လူတွေဟာ ဘယ်လောက်ပင် ချောမောနေပါစေ တစ်ခါတစ်ရံမှာ စိတ်ထားယုတ်ညံ့လူတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ရုပ်ရည်ပါ ချောမောပြီး စိတ်ထားလှသူတွေလည်း ရှိတတ်ကြပြန်ပါတယ်။ အခု တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့ ရုပ်ရည်ချောမောတဲ့အပြင် စိတ်ထားပါ လှပနေတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ နာမည်ကတော့ Luu လို့ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာလို ဆိုရင်လည်း လူပေ့ါ။ တကယ့်ကို လူသားတစ်ယောက်ပါပဲ။ သူဟာ အသက် ၈၇ နှစ်အရွယ်အဖွားအိုကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်တာကြောင့် လက်ထက်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အသက် ၂၀ သာရှိသေးတဲ့ လူငယ်ချောချောလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Luu ဆိုတဲ့ အမျိုးသားဟာ ကားအက်စီဒင့်ကြောင့် ခြေတစ်ဖက်ကို ဆုံးရှုံးထားခဲ့ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ ရုပ်သွင်ပြင်ဟာ ချောမောတာကြောင့် … Read more
မဲညစ်နေတဲ့ ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ခြံ၊ တံတောင်ဆစ်တွေကို အမြန်ဆုံးဖြူဝင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ…….
မဲညစ်နေတဲ့ ချိုင်းကြား၊ ပေါင်ခြံ၊ တံတောင်ဆစ်တွေကို အမြန်ဆုံးဖြူဝင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းများ… ပျိုမေတို့အနေနဲအတိုတွေ၊ လက်ပြတ်တွေဝတ်တဲ့အခါ ချိုင်းသားတွေ၊ ပေါင်ခြံတွေမဲနေရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေ လျော့နည်းနေတတ်ပါတယ်။ tခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ငွေကုန်ကြေးကျလည်း သက်သာတဲ့အပြင် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အိမ်မှာတင်ကိုယ်တိုင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်;လေးတွေဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးနဲ့လည်း အဆင်ပြေမှာပါနော် …။ (၁) ရှားစောင်းလက်ပပ်” လတျဆတျတဲ့ရှားစောငျးလကျပပျအနှဈကိုယူပွီး မညျးနတေဲ့ တံတောငျဆဈ၊ ဒူးခေါငျး နဲ့ ပေါငျခွံတှအေပွငျ တခွားမဲနတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှအေားလုံးကို လိမျးပေးနိုငျပါတယျ။ လိမျးပေးပွီးတဲ့အခါမှာတော့ မိနဈ ၂၀ လောကျထားပွီး ရနှေေးလေးနဲ့ ပွနျလညျဆေးကွောပေးလိုကျရုံပါပဲ။ ထူးခွားတဲ့ အာနိသငျကို ခကျြခငျြးတှေ့မွငျရမှာပါ …။ (၂) ဒိန်ချဉ်” ဒိနျခဉျြအသနျ့ကိုယူပွီး မညျးနတေဲ့ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပျိုငျးတှကေို လိမျးပေးပွီး ၁၅ မိနဈလောကျထားလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ ရနှေေးလေးနဲ့ ဆေးကွောပေးလိုကျ ရုံပါပဲ …။ … Read more
မင်္ဂလာပါနော်။ ချစ်သူရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်သူအမျိုးသား ကိုယ့်အပေါ် တကယ်ချစ်မချစ်ဆိုတာကို သူပြောတဲ့စကား သူလုပ်တဲ့အပြုအမူတွေကနေ တဆင့် သိရှိနိုင်ပါတယ်နော်။ ချစ်မိသွားပြီဆိုရင် သူပြောတဲ့ စကားတွေထဲမှာ အခုဖော်ပြမယ့် စကားလုံးတွေ ပါဝင်လာမှာပါနော်။ ၁။ ကိုယ်သတိထားမိတယ်… တကယ်ချစ်တဲ့ ကောင်လေးက သင့်ရဲ့ အသေးစိတ်ကအစ သတိထားမိနေမှာပါ။ သင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလား စိတ်ခုနေတာလား သင့်စိတ်ခံစားချက် ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကို အမြဲတမ်း သတိထားမိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ ကိုယ်မင်းကို ကူညီနိုင်ပါတယ်… ချစ်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်က သင့်ကို အမြဲတမ်း ကူညီဖို့ ဆန္ဒရှိနေမာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကို တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်စေမှာမဟုတ်ပါသလို သင်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်း အနားမှာရှိနေမှာပါ။ ၃။ ဒီအရာက မင်းကို သတိရသွားစေတယ်… ဥပမာ သင်ကြိုက်တတ်တဲ့ ဟင်းလေး ချက်စားဖြစ်ရင် သင့်ကိုသတိရတာမျိုး၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အဝတ်အစား ဒီဇိုင်းမျိုးတွေ့ရင် … Read more
ခုခေတ် မြန်မာ မိန်းကလေးအများစု ဘာကြောင့် ဘဝပျက်သွားရသလဲ ဆိုတာ သိစေချင်လို့ ဒီ POST လေးကို တင်ရတာပါ…
အစဆုံးဖတ်ပြီး နှမချင်း ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုရင် share လုပ်ပေးပါ “အရမ်းချစ်တယ် အချစ်ရယ်” မောင့်ကို တကယ်ချစ်တယ် ဆိုရင် “မောင့် ဆန္ဒ လိုက်လျော ပေးပါနော် ”“ဟင့်အင်း မောင်” မလိုက်လျော ပါရစေနဲ့ ”မောင်” ချစ်ကလည်းကွာ….”မောင်က ချစ်ကို တကယ်ချစ်တာပါ ကွာ..”“ဟင့်အင်း မောင်” ကျမတို့ မိန်းမသား ဘဝမှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အပျိုစင် ဘဝလေးကိုတော့ လက်မထပ်ရသေးပဲ မပေးဆပ်ပရစေနဲ့လား “မောင်”..တသက်လုံး တန်ဖိုးထားတဲ့ အပျိုစင် ဘဝလေးကိုတော့ မလိုချင်ပါနဲ့အုံး နော်..”မောင်””တောက်စ်..” မင်း ငါ့ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ ဒါလားကွာ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ပြီး မင်း ငါ့ အပေါ် ဒီလောက်တောင် မလိုက်လျော ပေးနိုင်ဘူးလားမင်း ငါ့ အပေါ် တကယ်ချစ်တာရော ဟုတ်ရဲ့လားTalky တွေကို … Read more
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ (အိုး) တင် ၊ ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ် လား? မစစ်လား? ဝေဖန်နေကြတဲ့ တစ်ချို့ လူတွေ ဖတ်ဖို့
ယောက်ျားဆိုတာ မယုတ်မာ ဖို့ပဲ လိုတာပါ … မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ တင် ရင် တွေကြည့်ပြီးအပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန်နေတဲ့ တစ်ချို့ကောင်တွေမင်းတို့ရော လူပျိုစစ်ရဲ့လား?ရမလား စမ်းတာ ယောက်ျား သဘာဝလို့ မပြောပါနဲ့ အဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းကြောင့် မိန်းကလေးပေါင်းများစွာရဲ့အရှက်သိက္ခာ နစ်နာမှုတွေ ဘယ်လောက်များပြီးလဲကိုယ်ချင်းစာမိရဲ့လား? အိုင်တွေ့လို့ ခြေဆေးမယ် ဆိုကတည်းက ကိုယ်ခြေထောက်က နဂိုကတည်းက မသန့်လို့ပဲ ဆိုတာသိထားပါ… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နှမချင်းစာနာတတ်တဲ့ စိတ် မရှိရင် ခွေးထက်ယုတ်ညံသွားလိမ့်မယ်… Tattoo ထိုးမှ ယောက်ျား ပီသတယ် ထင်နေလားဆေးလိပ်/ အရက်သောက်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား..? ဗလတောင့်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား ?နောက်ဆုံးစစ်တပ်ထဲဝင်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား? တစ်ကယ် တမ်းတော့ ယောက်ျားပီသဖို့ သူများသားသမီးကိုမယုတ်မာဖို့ပဲ လိုတာပါ… မင်းသာ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် … Read more
ယောက်ျားတွေက အပြုအစုကောင်း တဲ့ မိန်းမမျိုးရှာဖွေ ယူရင် မယား ယူတာလား ? ကျွန် ဝယ်တာလား? တချို့က မေးကြတယ်လို့…….
…ယောက်ျားတွေက အပြုအစုကောင်း တဲ့ မိန်းမမျိုးရှာဖွေ ယူရင် မယား ယူတာလား ? ကျွန် ဝယ်တာလား? တချို့က မေးကြတယ်လို့ ကျနော့်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ် အိမ်ကပေးစားတာမဟုတ်ဘူး ချစ်လို့ယူထားတဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်သူ့မှာရှိတယ် တစ်နှစ်ကျော်‌လောက်ပေါင်းပြီး ဒီကောင် နောက်တစ်ယောက်နဲ့ဇယားကပ်ရော …။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကမျိုးစောင့် ဥပဒေတွေဘာတွေ မပြဌာန်းခင် လွန်ခဲ့တဲ့ 3နှစ်လောက်အရင်ကပေါ့ မိန်းမကသိတော့တငိုငိုတရီရီနဲ့ကွာရှင်းမယ်မပေါင်းဘူးလုပ်ရော၊သူ့ပတ်ဝန်းကျင် သူ့အသိုင်းအဝိုင်းကပါ ဒီကောင့်ကို ရွံပြီးလုံးဝလက်မခံတော့ အဲဒီမယား အငယ်လေးနဲ့ တခြားမြို့မှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ပြီးနေတယ် …။သူ့ပထမမိန်းမက ရိုးရိုးအေးအေး စက်ဆရာမ ကောင်မလေးက အလှကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ဖြူဖြူသွယ်သွယ် ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်ချစ်စရာလေး၊ နောက်ယူ လိုက်တဲ့ မယားငယ်က KTVက ကောင်မလေး ၊သူ့ပထမမယားရဲ့ခြေဖျားမမီဘူး …။ကိုယ်လဲသိသိချင်းက ဒီကောင့်ကိုရွံပြီးစကားမပြောဘူး။ အဲဒီလိုဖြစ်ပြီး 2နှစ်လောက်ကြာပြီးတော့ မန်းလေးသွားရင်း တစ်ရက်ဈေးချိုထဲမှာအမှတ် မထင် … Read more
အသက် (၁၆) နှစ် မှ (၂၄) နှစ်အတွင်း မိန်းကလေး များသာ ဖတ်ရန် …..
အသက် (၁၆) နှစ် မှ (၂၄) နှစ်အတွင်း မိန်းကလေး များသာ ဖတ်ရန် ညီမလေး ရေ …. လှပတဲ့ မျက်နှာ တစ်ခုက တစ် ချိန် ကျ ရင် အို မင်း သွားလိမ့်မယ် . . . . .။ စွဲမက်စရာ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း တွေ က လည်း တစ်ချိန် ကျရင် ပြောင်း လဲ သွားပါ လိမ့် မယ် နော် . . .။ ဒါပေမယ့် မိန်းမကောင်း တစ်ယောက်က တော့ တစ်ချိန် ကျရင် လည်း မိန်းမကောင်း ပါပဲ ။ ဘယ် … Read more